Maxaad Ka Ogtahay Jasiiradda Dumarka La Afduubo Marka La Guursanayo? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaxaad Ka Ogtahay Jasiiradda Dumarka La Afduubo Marka La Guursanayo?
Mas’uuliyiinta dalka Indonesia ayaa si aadag u sheegay in ay soo afjari doonaan gabdhaha la afduubto ka dibna la guursado, arrintaas oo caado dhaqameed ka ah jasiiradda Sumba.
Waxay arrintan soo shaac baxday ka dib markii la afduubtay gabadh taas oo buuq badan ka dhashay, waxayna sababtay in wax la iska weydiiyo hab-dhaqankaas.
Saacad gudaheeda, raggii waxay gabadha usoo jeediyeen in kullanka uu ka dhacayo goob kale, waxayna ka dalbadeen in ay la raado gaarigooda, balse gabadhii waxaay ku adkeysatay in ay raaceyso mooto, markii ay gaartay meeshii waxaa ku soo booday oo furihii ka dafay rag kale oo koox ah.
“Waan qeylinayay markii ay isku dayayeen in ay xoog igu galiyaan baabuurka, cid i caawisay ma jirin, gudaha gaarigana waxaa garba duub ii qabtay laba nin,” ayay tiri iyadoo sheegtay in ay ogeyd waxa dhacaya.
Sababta loo soo qabtay gabdhaaas waxay ahayd in si khasab ah lagu guursado.
Guurka masaafada qasabka ah ee ddalkaas looga yaqaano kawin tangkap, ayaa ah caado buuq badan dhalisay oo ka taagan deegaanka Sumba. Arrintan waxaa inta badan sameeya qoyska gabadha ama saaxiibada iyo ehelada wiilka doonaya in uu guursado gabadha.
Inkastoo marar badan ay dadka u dooda xuquuqda dumarka ay soo jeediyeen in la joojiyo dhaqankaas, haddana wali waxaa muuqata in uu ka jiro qeyb badan oo ka mid ah Sumba ee bariga dalka Indonesia.
Intii ay ku sugneyd gudaha gaariga, Citra (oo ah magaca aan ugu yeereyno gabadha) waxaa u suurtagashay inay farriin u dirto saaxiibkeed iyo waalidkeeda kahor inta aanan la geynin guri dhaqameed, waxaana markii la geeyay halkii loo waday ay ogaatay in qoyska soo afduubay ay yihiin qaraabo ama ehel.
“Waxaa jiray dad badan oo halkaas igu sugayay. Waxay markiiba bilaabeen caado dhaqameed dhanka guurka ah.
“Dadka deegaanka Sumba waxay aaminsan yihiin in haddii biyo ay taabtaan dhabankaaga in ay sababayaan in gabadha aysan ka bixi karin gurigaas,” ayay tiri Citra.
Waxay intaa raacisay inay ka warqabtay in arrintaas dhaceyso, markii ay isku dayeenna, waxay sheegtay in ay ku dadaashay in aysan biyaha gaarin dhabankeeda.
Waxay Citra xaqiijisay in dadkii soo qabtay ay u sheegeen in ay wanaag la doonayaan, ayna isku dayeen inay ku qanciyaan guurka.
“Waan ooyay illaa uu cunaha i qalalo, waxaan isku tuuray dhulka, waxaan ku tuuray furaha mootadii aan watay, madaxa ayaa iska garaacay si aan u dareensiiyo in waxa ay sameynayaan aanan rabin, ayna ii damqadaan.”
Muddo dhan lix maalmood ayaa lagu hayay guri. Waxay tiri: “Habeenkii oo dhan waan oynayay oo ma seexan jirin, waxaana dareemay in aan dhimanayo.”
Citra waxay diiday in ay wax cunto ama cabto, waxwalba oo ay qoyska usoo bandhigeen, Waxay ogayd in wax cunidda ay tahay xeelaad, maadaam haddii aad raashiinka reerkaas cunto ay ka dhigan tahay in aad aqbashay qoyska.
Ma jirto meel lagu wadahadlo
Saddex dumar ah oo ay ka mid tahay Citra ayaa ugu dambeyntii laga soo daayay dadkii haystay, waxaana laba ka mid ah kiisaskaas laga duubay muuqaal bishii June, halka midda kalena si khasab ah loo guursaday.
Sida ay sheegeen ururkaas u dooda xuquuqda haweenka, “dumarka diida guurka noocaas ah waxaa lagu dhex ceebeeyaan bulshada”.
“Alle mahadii, waxaan hadda guursaday wiilkii aan wada soconay, waxaana heysanaa hal cunug,,” ayay tiri Citra oo dhoola cadeeneysa.
Arrintan oo hadal heyn badan dhalisay, ayay sababtay in hogaamiyeyaasha gobolkaas ay sheegaan in ay ka go’an tahay sidii loo soo afjari lahaa dhaqankaas masaafeysiga qasabka ah.
Waxaa kale oo ay ballan qaaday in dhawaan uu bilaabanayo dadaal looga hortagayo arrintaaa, waxayna ficillada noocaas oo kale ku tilmaamtay xadgudub ka dhan ah dumarka.
Ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa soo dhaweeyay arrinkaas, waxayna Citra sheegtay in aanan la aqbali karin in dumar kale ay wajahaan wixii ay iyada martay.
Abiy Ahmed Oo Ku Dhawaaqay War Culus Oo La Xidhiidha Biyo-Xidheenka Xiisadda Dhaliyey